Kooxda Man Utd OO ku Guleysatay Horyaalka Englishka | BARTA BARTA CAYAARAHAA BARTA
← Kooxda Barcelona OO ku Guleysatay Koobka Boqorka Dalkeda
Intar oo Iyadana Xalay Xalaashatay Koobka Seria A →
Kooxda Man Utd OO ku Guleysatay Horyaalka Englishka
LONDON:- Naadiga Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa hanatay horyaalkeedii 18-aad ee dalka Ingiriiska kadib marki ay ka heshay kooxda Arsenal hal dhibic oo ay u baahneyd si ay u noqoto mar kale horyaalka Ingiriiska.
Manchester ayaa maanta ku marti gelisay garoonkeeda Old Traford naadiga caanka ah ee Arsenal waxaana ciyaartaasi oo aheyd mid xiiso laheyd ay kusoo dilaatay bar bar dhac 0-0 ah.
Kooxa United ayaa umuuqatay mid difaac ku jirtay,waxaase ciyaarta ku fir fircooneyd kooxda Arsenal oo aanan abuurin wax fursado ah oo ay halis ku gelin kartay kooxda Manchester,waxaana garsoorihii dhex dhexaadinayey ciyaarta uu calaamada huruudka ah siiyey ilaa iyo shan ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda Arsenal.
Taageerayaasha kooxda Man Utd ayaa durbadiiba bilaabay dabaaldaga iyo damaashaadka ay ku weeyneeynayaan hanashada horyaalka dalka Ingiriiska iyaga oo ka sukoow hanashada horyaalka ku faraxsan rikoor ay ka jebiyeen kooxda Liverpool oo
aheyd kooxda uga hanashada badneyd horyaalka,waxaana haatan ugu hanasho badan horyaalka Ingiriiska kooxaha Liverpool iyo Manchester United oo wada leh min 18 horyaal.
Iyadoo uu ka harsanyahay horyaalka hal kulan oo qura ayaa kooxda Manchester United waxaa ay leedahay 87 dhibcood,halka ay kooxda Liverpool oo birri la ciyaari doonto kooxda West Bromwich Albion ay leedahay 80 dhibcood. Hadaba waxaa soo baxaya
warar kala duwan oo sheegaya in Macalinka kooxda Liverpool uu
Hampalyo u diro macalinaka kooxda man Utd Gabi ahaanba
Diiday ayadoo aan la garaneyn waxa sababay
Mohamed Abdi Rashiid
Comments Off on Kooxda Man Utd OO ku Guleysatay Horyaalka Englishka
Posted by Mohamed Tollman on May 18, 2009 in Uncategorized